Muqdisho: Kulanka Midowga Musharraxiinta iyo Farriimaha ay direen | Berberanews.com
Home WARARKA Muqdisho: Kulanka Midowga Musharraxiinta iyo Farriimaha ay direen
Muqdisho: Kulanka Midowga Musharraxiinta iyo Farriimaha ay direen
Muqdisho-(Berberanews)-Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa habeenkii xalay ahaa ka qaybgalay kulan ka dhacay Hotel Afrik, oo looga hadlayay “Xilliga Kala-guurka iyo Xaalada Siyaasadeed ee Dalka”.
Shirkaas ayaa ay khudbado ka jeediyeen musharrixiintu, waxaana isla sida oo kale shirka ka qayb galay qeybaha kala duwan bulshada.
Amniga Hotelka Afrik iyo nawaaxigiisa ayaa si aad ah loo adkeeyay, Ciidamada sugaya Amniga musharaxiinta ayaa xiray wadada KM4 ee aada dhinaca Garoonka diyaaradaha, halkaasoo gaadiidka dagaalka lagu gooyay.
Waxaynu si gaar ah u eegi doonnaa qodobadii ugu waaweynaa ee ay ka hadleen musharrixiinta mucaaradka.
Xasan Cali Khayre : ‘ 40-ka maalmood ee socdaa waxay jaangoynn doonaan 40-sano ee soo socda.’
Madashaas xalay, dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Xasan Cali Khayre oo musharrax madaxweyne ah sida oo kalena hore u soo ahaa raysalwasaare. Khayre ayaa sheegay in doorashada soo aaddani ay tahay midda mustaqbalka Soomaaliya jihayn doonta xilliyada soo socda.
“Marka aan ka hadlayno muhiimadda doorasho ku dhacda qaab la wada oggol yahay ma aha inaan ka wada fikirno 40-ka maalmood ee soo socota, waa inaan ka fikirnaa afarta sano iyo 40ka sano ee soo socda. Sababtoo ah, qaabka aan u maarayno iyo sida ay wax u dhacaan ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mustaqbalka afartanka sano ee soo socoto.” ayuu yidhi Khayre
Khayre ayaa sidoo kale sheegay in wixii ka uu ka digey oo xilkiisii ku waayey ay maanta taagan yihiin sida uu ku anadcooday.
“Sidii aan hoay u sheegay markii aan xukunka joogay ee aan raysalwasaaraha ahaa, waxaan idhi haddii aaanay Soomaalidu ku heshiisiin nidaamka doorashada madaxtinnimada dalka, ka hor inta aanay doorashadu dhicin, kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadagga dawladnimada dalka, haddii markaa la isku dayo ama ay dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahan waxaan hubaa in ay ka dhalan doonaan dhibaatooyin badan.”
Xasan Cali Khayre ayaa se dad badan ayaa ku dhaliileen in intuu u hadlayey uusan si toosa u soo hadal qaadin madaxweyne Farmaajo, halka musharrixinta kalen hadalkoodu toos madaxweynaha ugu socday. Waxaana ay sheegeen in weli uu u tudhayo madaxweynihii uu raysalwasaaraha u ahaa.
Dowladda faderaalka ayaa ku adkeysanaysa in hanaanka doorashada uu yahay mid waafaqsan heshiiskii ay bishii September ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe saxiixeen.
Shariif Xasan: ‘Anaa dheelaa oo garsoore noqonaa sharci maaha’
Shariif Xasan shiikh Aadan, oo isna horay u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed, imika ka mid ah musharrixiinta ku jira Midawga Musharrixiinta oo isna madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in xilligiisii maalmaha loo tirinayey haddana ay iyaguna Farmaajo u tirinayaan maalmaha.
” Haddii doorasho inta la isku dhiibo, la isku beddelo la ogolaan waayo, wixii hore u soo dhici jiraa dhacaa, taa iyada dhibaato waayo. Markaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaan leennahay ayaan dhawyad sidii lagu doortay wuu og yahay. madaxweynaa loo doortay waa loo bannaan baxay, markaa maantana waxaan ka rabnaa sidii oo kale inuu tartamo haddii uu guulaysto waa loo bannaan baxaa, haddii tartanka ku guulaysan waayo waa in uu sidii labadii madaxweyne kale ee ka horraysay gacanta u qabteen uu isna gacanta u qabtaa laga rabaa”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur : ‘ Aayar ayaannu isagoo keli ah siibaynaa’
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in muddaynta xilligii doorashada iyadoo aan la isla oggolayn ay tahay in madaxweyne Farmaajo uusan cidna u joojinayn. Waxaana uu sheegay maadaama dalku 4.5 yahay Puntland iyo Jubbaland aysan doorashada ku jirin macnaheedu waa in aanu deegnnadaa metelin.
“Madaxweynaha cawada wuxuu soo saaray jadwalkii doorashada, macnaheedu waxa weeye cid aan dhegaysanayo ma jirto. Waxaa ku qoran, waxaan ka rabnaa madaxwynayaasha dawlad goboleedyada in ay doorashada qabtaan. Yaa waaye madaxweynayaasha dawlad goboleeddada ee doorashada qabanayaa? Ma Siciid Cabdillaahi Deni baa? Ma Axmed Madoobaa? Maya, waa Koonfurgalbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo walaalaheen Somaliland oo la rabo annagoo taagan in Muqdisho laga dhaco. Iskusoo duubo Farmaajo waxa uu ku tashanaa waa intaa. Wuxuu yiri, Puntland iyo Jubbaland uma baahni oo waa ka soconaa! Dhib ma leh, Doorashada ha noo daayo, haddii uusan Jubaland iyo Puntland haynin saa iyagaa metelaa. Annaga iyo Shariif Xasan ayaa ku tartmayna”
Cabdiraxmaan Cabdishkuur ayaa sida oo kale sheegay in aayar madaxweynaha la bixin doono iyadoo aysan dhib dhicin, siina adkeeyey in la isugu soo baxo muddharaadka ay ku baaqeen.
“Madaxweyne Farmaajo dulmi intaas ka badan loogu dulqaadan mayo. Haddii uu yiraahdo oo waa la burburaa, cabsi haqabina, wax burburaya ma leh isagaa aayar isaga siibeynaa.. Iidinka waxaa la idinka rabaa muddharaad nabad ah in aa u so baxdaan oo aydaan cabsannin”
Xasan Shiikh: ‘ Sakhrada Xukun Jacaylku haa kaa dego’
Xasan Shiikh, madaxweynihii Farmaajo ka horreeyey oo mar kale musharrax ah ayaa ka mid ahaa musharaxiinta badnaa ee madashaasi ka hadlay. Waxaana uu madaxweynaha xilka haya ugu baaqay in waddada uu hayo uu ka soo noqdo oo miiska wadahadallada uu kusoo noqdo.
“Walaalkeen Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo waxaan leennahay raalli ahaw, caqliga ha kuu soo noqdo skhradda xukun jacaylku ha kaa degto, dadkaaga usoo noqo, fursad weli haysataa in mar kale lagu doorto, oo noqoto madaxweynihii taariikhda laba jeer la doorta.”
Xasan Shiikh ayaa isna mar kale sheegay in bannaanbaxaas loo diyaar garoobo.
“Bannaanbaxa lagu baaqay waa soo socdaa, ha loo diyaargaroobo. Dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho deggani ha u diyaargarooben”
Shiikh Shariif: ‘Qofku waxa uu ku karaamaysan yahay inta uu sharciga ku taagan yahay’
Shiikh Shariif oo xilli aad u badan madasha ka hadlayey ayaa mid mid u dul istaagay waaxaha dawladda, isaga oo sheegayey in waax kastaa ku guuldarraysatay in wixii loo igmaday ay qabato.
“Afartii sano waa soo dhammaatay waxaa la rabaa doorasho in la aado. See la rabaa in doorasho lagu aado? Ma waxa lagu aadayaa guddi habeen madaw la soo magacaaby, oo ka kooban ciidammo, taageerayaal iyo shaqaale rayid ah. Sharcigaan oggolayn, nidaamka caddaaladaan ogolayn doorashada waa la yaqaannaaye dhulka ha la dhigo”
“Qofku waxa uu ku karaamaysan yahay inta uu sharciga ku taagan yahay, sharcidarro hadday noqoto qof caadi ah ayuu noqonaa”.
Marka laga tago dhaliilihii guud ee ku aaddanaa doorashada ay dhammaantood jeedinayeen, waxaa se ugu weynaa ku baaqidda bannaanbaxa inkasta oo aysan toos u muddayn maalinta uu dhici doono.
mushharaxiinta madaxweynaha Somalia
Previous articleItoobiya: Xasuuq lagu dilay in ka badan 100 qof gobolka Benishangul-Gumaz
Next articleWill Somaliland’s Berbera port be a threat to Djibouti’s